देउसी भैलोको दक्षिणाले गोरेटो बाटो मर्मत « Sthaniya Khabar
देउसी भैलोको दक्षिणाले गोरेटो बाटो मर्मत
प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७५, बुधबार १३:००
स्थानीय खबर, ५ मंसिर । नेत्रावती डबजोङ गाउपालिकाका चौताराबासीले देउसी भैलोबाट संकलन भएको रकमबाट गोरेटो बाटो मर्मत गरेका छन् । वडा नं. ३ का चौताराबासीले ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ’ नारा बनाएर सृजनात्मक काम गरेका हुन् ।
संकलन भएको दक्षिणाले ५५ मिटर स्थानीय गोरेटो सरसफाई तथा मर्मत गरेको स्थानीयबासी कृष्ण सुनारले बताए । तिहारको भाईटीकाको दिनमा खेलेको देउसी भैलोबाट २२ हजार रुपैयाँ दक्षिणा संकलन भएको थियो ।
संकलन भएको उक्त रकम र स्थानीयबासीको श्रमदान गरि करिब ९० हजार रुपैयाँ लागतमा सानो गोरेटो बाटोलाई मर्मत गर्नुका साथै फराकिलो बनाइएको वडा नं. ३ का अध्यक्ष विजय पाख्रिनले जानकारी दिए । आवश्यक ठाउँमा पेटीहरूमा ढलान पनि गरिएको पाख्रिनले बताए ।
“देउसी भैलोलाई पनि हामीले विकास निर्माणका लागी सदुपयोग गरेका हौं,” पाख्रिनले भने, “स्थानीयवासीले पनि उत्साहित भएर ३ दिन श्रमदान गर्नुभयो ।”
यस्तै गाउ भित्रको दलित बस्ती जाने बाटो धेरै पुरानो र सानो हुनुको साथै वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदै आएको थियो । अहिले उक्त बाटोलाई पनि केही फराकिलो बनाएर सरसफाई पनि गरेको छ । गोरेटो बाटो फराकिलो र सफा भएपछि आफूहरूलाई आवतजावतमा सझिलो भएको भन्दै स्थानीयवासी सुनारले खुशी व्यक्त गरे ।